Fandratrana olona teny Ampitatafika: samy MD ireo zanaka polisy sy ireo niharan’ny herisetra | NewsMada
Par Taratra sur 19/06/2019
Niakatra fampanoavana omaly ka naiditra am-ponja vonjimaika (MD) eny Antanimora ireo zanaka polisy roa tompon’antoka tamin’ny fanaovana herisetra sy nandratra olona teny Ambohikely Ampitatafika ary ireo roa lahy niharan’ny herisetran’ireto polisy…
Nahazo fahafahana vonjimaika (LP) ilay kaomisera rain’izy roa lahy nidaroka ilay raim-pianakaviana iray teny Ambohikely Ampitatafika, ny fiandohan’ny volana jona lasa teo. Naiditra am-ponja niaraka tamin’ireo zanaka kaomisera ireo koa izy roa lahy (ilay raim-pianakaviana niharam-boina sy ny rahalahiny) niharan’ny herisetran’ireo polisy tamin’io fotoana io. Voalazan’ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy fa samy nametraka fitoriana teny amin’ny fitsarana sy ny polisy na ireo niharam-boina na ireo polisy (ilay kaomisera sy ny zanany tao anatin’ilay fiara) ka taorian’ny fanadihadiana natao teo anivon’ny sampandraharaha misahana ny fanadihadiana ny polisy (IGPN) sy ny polisin’ny faritany dia natolotra ny fampanoavana ny raharaha ka izao niafara tamin’ny fampidirana am-ponja vonjimaika eny Antanimora azy mirahalahy zanaka kaomisera sy ireo roa lahy niharan’ny herisetra.
Naratra mafy ilay niharam-boina…
Tsiahivina fa tamin’io fotoana io, hampiditra ny fiarany tao amin’ny garazy ilay niharam-boina no tratran’ny herisetran’ireto polisy ireto. Nolazain’izy ireo fa nibahana ny arabe ilay raim-pianakaviana tamin’io fotoana ka tratran’ny ompa variraraka nataon’ireo polisy voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ity raharaha ity. Niezaka nanatona ary nangata-panazavana tamin’ireto polisy ilay raim-pianakaviana niharam-boina kanjo daroka tsy nisy toy izany no nahazo azy. Nahita izany ny rahalahiny tao an-trano ka lasa nanenjika ireo polisy nanao herisetra avy ao aoriana. Noho ny ratra nahazo azy, nentin’ny fianakaviana haingana teny amin’ny hopitaly ilay niharam-boina. Na teo aza anefa izany, avotra soa aman-tsara ihany izy. Niakatra teny anivon’ny IGPN ny raharaha taorian’izay. Niparitaka tany anaty tambajotran-tserasera ity herisetra nataona polisy ka fotoana fohy taorian’izay, nisy ny fanambarana nataon’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Contrôleur général de police, Rafanomezantsoa Roger, nilaza fa fandikan-dalàna ka tsy azo ekena velively ny fisiana polisy manao herisetra toy izao. Nilaza ity manamboninahitra ambony eo anivon’ny polisim-pirenena ity fa mandray an-tanana ny raharaha ny teo anivon’ny minisitera.